ဖြစ်ရပ်မှန်(၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဖြစ်ရပ်မှန်(၁)
Posted by Computer on Feb 24, 2012 in Copy/Paste | 26 comments
Htein Lin has written 8 post in this Website..
အနော့တို့ကတော့ သက်ဆိုင်ရာကတော့ မဟုတ်ဘူး
တက်တိုင်ရာကို ရောက်လာသမျှ တိုင်စာအကုန်လုံး ပိဿာချိန်နဲ့ ရောင်းစားကြတာ များတယ်ကွဲ့ 
ထုံးစံ အတိုင်း ဆန္ဒပြကြဗျာ
ကျုပ် ကိုဖိုးဖြူကိုခေါ်ပြီး လာခဲ့မယ်..ဘာမှပူနဲ့ 
အခွန်ဆိုတာ ရှောင်ဖို. အဲလေ.. ဟုတ်ပေါင်… ဆောင်ဖို့ … ဆောင်ဆောင်ဆောင်… သများတော့အခွန်တောင်းရင် ပေးလိုက်မှာ… ပီနံအိတ်ခွံတွေ တပုံ ဂျီး…
သများနိုင်ငံတွေနဲ. ရင်ဘောင်တန်းနိုင်အောင်.. ဒို့မြန်မာတွေ များမကြာမီ.. အခွန် ရှောင်လိမ်..ဖြောင် ခြင်းတည်း ဟူသော ပညာရပ်များကို အချိန်နှင့်တဗျေး ညီ သင်ကြား ပေးသွားပါမြီ….
ဟိုမှာအိပ်နေကြတဲ့လူတွေအလုပ်မရှိလို့တဲ့။ နှိုးပြီးပြောပေးလိုက်ပါအုံး။ အလုပ်ရသွားအောင်။
ကျွန်တော်တို့ဆီမှာလည်းဒီလိုပဲဗျို့……လစာရင်းက 30000 ကိုအခွန်က တစ်လ 7900 ဆောင်နေရတယ်…ကိုယ်တွေ့နော်…လက်ရှိကိုယ်တွေ့ကြီးရယ်….. တစ်ခြားဟာလေးတွေထပ်ဆောင်ထားလို့တော်သေးတာပေါ့… နို့မို့ဆိုရင်လား………………
zar ni says:
ဟာ တော်တော်လေးများတာဘဲ။အဲလောက်ဖြတ်တယ် သေချာရင်တော့ အရေးယူပေးဖို့ တောင်းဆိုဆန္ဒပြ
အာ…..သေခြာရင်တော့လုပ်နေသေးတယ်…..ဒီနေ့ထိဗျ…..ရုံးကလည်းအစိုးရကိုကျွန်တော်တို့နာမည်နဲ့ဆောင်ထားတဲ့ အခွန်စာရွက်ကို ပြန်ပေးတယ်…… စိတ်ညစ်တယ်ဗျာ…..ဂယ်ပဲ
တစ်ခါမှ အဲလောက်အများကြီးဖြတ်တာ မတွေ့ရဘူးပါဘူး။.. သေချာလေးစုံစမ်းပြီး…ဟုတ်တယ် ဆိုရင် စက်ရုံအမည်လေး ပြောပြပေးပါ.. ..။ ကူညီဖို့ အသင့်ပါပဲ။..
ဟုတ်….ကူညီပေးပါဦး…တစ်ကယ်ပါ….Green Rose ရဲ့ Personal mail…ဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခုရေးပေးပါလား….အပ်ပြီး Company Name ကိုပြောပြပေးပါ့မယ်…..
Posted By ” COMPUTER “.
now replied by ” DAVIT “.
No one know who you are and where are you from?
Why could not tell company name if you are right?
If you believed that you are right, Tell the company name here, MG.
We ( MG villagers ) will help you as much as we can.
Because we love the truth and fair.
Dare to fight.!!!!
ဒွတ်ခပဲဗျာ………… ကျွန်တော့်ရုံးကလူကြီးတစ်ချို့လည်း ဒီဆိုဒ်ကိုကြည့်တယ်ဗျ …… ကျွန်တော့် အကောင့်3ခုလောက်ကိုလည်း ရုံးကတစ်ချို့ကသိနေတယ်ဗျ…….ပြောချင်တာ ပါးစပ်ကိုယားနေတာပဲ…. တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ အကောင့်ပေးဗျာ….ပြောပေးမယ် …… ကဲ………..ရှင်းပြီလား
ဘဏ္ဍာရေးနဲ့ အခွန်ဝန်ကြီး အနေနဲ့ လွှတ်တော်မှာတင်ပြပီး အခွန်ဥပဒေကိုပြန်ပြင်သင့်နေပါပြီ…
ရွာသူား များနဲ့ စာဖတ်သူတွေထဲမှာ အခွန်အခ အကြောင်းသိတဲ့လူရှိရင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာ
အခွန်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး နည်းနည်းလောက် share မယ်နော်။
၀င်ငွေအခွန်ဆိုတ အခွန်ဥပဒေအရ သတ်မှတ်ထားပြီးသားပါ။
များသောအားဖြင့် ကုမ္ပ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေ ၀င်ငွေအခွန်( income tax) ဆောင်ရတဲ့အကြောင်းကို မသိကြဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တချို့ကုမ္ပ္ပဏီတွေက နည်းမျိုးစုံနဲ့ အခွန်ကိုရှောင်ကြတယ်။ ၀န်ထမ်းရဲ့ ၀င်ငွေကို လျှော့ပြကြတယ်။ Ledger book ကိုနှစ်မျိုးထားတယ်။ ကုမ္ပ္ပဏီမှာတစ်မျိုး၊ အခွန်ဌာနကို တင်တဲ့အခါ တစ်မျိုးပေါ့။ တချို့ကုမ္ပ္ပဏီကျတော့လည်း ၀န်ထမ်းရဲ့ လစာကို အခွန်ဌာနမှာ ပုံသေပြပြီး ၀န်ထမ်းရဲ့ Basic ထဲက ၀င်ငွေခွန်ကို တစ်ခါထဲဖြတ်ထားလိုက်တယ်။ ( ဥပမာ Basic ၅၅,၀၀၀ ထဲက ၀င်ငွေခွန် ၅,၀၀၀ ကိုနှုတ်ပြီး ၅၀,၀၀၀ ကနေစပေးတယ်လေ။) နှစ်ကုန်လို့ လစာတိုးလည်း သူ့ရဲ့ ၀င်ငွေခွန်ကမပြောင်းဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အလုပ်မထွက်မချင်း သူရဲ့လစာက ပုံသေလေ။ အခွန်ဌာနမှာ လစာတိုးတာကို မပြဘူးလေ။ တချို့ကုမ္ပ္ပဏီကျတော့လည်း ၀င်ငွေကို ၅,၀၀၀၊ ၁၀,၀၀၀ လောက်ဘဲပြကြတယ်။
၀န်ထမ်းရဲ့ဝင်ငွေအခွန် ဖြတ်တာကလည်း ကုမ္ပ္ပဏီက ဖြတ်ချင်တိုင်းဖြတ်လို့ မရပါဘူး။ အစိုးရရဲ့ ၀င်ငွေခွန် ဥပဒေအရ တွက်နည်းရှိပြီးသားပါ။
တွက်နည်းအကျဉ်းကတော့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ တစ်နှစ်ဝင်ငွေအပေါ်မှာ အခြေခံပါတယ်။ ဥပမာ တစ်လကို Basic ၃၀,၀၀၀ ၀င်ငွေရတယ်ဆိုရင် တစ်နှစ်ရတဲ့စုစုပေါင်းဝင်ငွေ (360,000) ထဲက သက်သာခွင့် 12,000 ကိုပြန်နှုတ်ပေးတယ်။ ဇနီးရှိရင် 5,000 သားသမီးရှိရင် အသက်အလိုက် (၁လမှ ၁၈နှစ်အထိ) ကင်းလွတ် ခွင့်ရတယ်။
တစ်လ၀င်ငွေ	ကျပ် ၃၀၀၀၀
တနှစ်ဝင်ငွေ	ကျပ် ၃၆၀၀၀၀
သက်သာခွင့်	ကျပ် (၁၂၀၀၀)
ဇနီး	ကျပ် (၅၀၀၀)
ကလေး(အသက် ၁လ-၅နှစ်)	ကျပ် (၁၀၀၀)
စည်းကြပ်ရန်ဝင်ငွေပေါင်း	ကျပ် ၃၄၂၀၀၀
၀င်ငွေ ၁ကျပ် မှ ၅၀၀၀	၃ ရာခိုင်နှုန်း (%)	ကျပ် ၁၅၀ ကျပ် ၅၀၀၀
၀င်ငွေ ၅၀၀၁ ကျပ်မှ ၁၀၀၀၀	၅ ရာခိုင်နှုန်း (%)	ကျပ် ၂၅၀ ကျပ် ၅၀၀၀
၀င်ငွေ ၁၀၀၀၁ကျပ် မှ ၂၀၀၀၀	၇ ရာခိုင်နှုန်း (%)	ကျပ် ၇၀၀ ကျပ် ၁၀၀၀၀
၀င်ငွေ ၂၀၀၀၁ကျပ် မှ ၃၀၀၀၀	၁၀ ရာခိုင်နှုန်း (%)	ကျပ် ၁၀၀၀ ကျပ် ၁၀၀၀၀
၀င်ငွေ ၃၀၀၀၁ကျပ် မှ ၅၀၀၀၀	၁၂ ရာခိုင်နှုန်း (%)	ကျပ် ၂၄၀၀ ကျပ် ၂၀၀၀၀
၀င်ငွေ ၅၀၀၀၁ကျပ် မှ ၇၀၀၀၀	၁၅ ရာခိုင်နှုန်း (%)	ကျပ် ၃၀၀၀ ကျပ် ၂၀၀၀၀
၀င်ငွေ ၇၀၀၀၁ကျပ် မှ ၉၀၀၀၀	၁၆ ရာခိုင်နှုန်း (%)	ကျပ် ၃၂၀၀ ကျပ် ၂၀၀၀၀
၀င်ငွေ ၉၀၀၀၁ကျပ် မှ ၁၁၀၀၀၀	၁၇ ရာခိုင်နှုန်း (%)	ကျပ် ၃၄၀၀ ကျပ် ၂၀၀၀၀
၀င်ငွေ ၁၁၀၀၀၁ကျပ် မှ ၁၅၀၀၀၀	၁၈ ရာခိုင်နှုန်း (%)	ကျပ် ၇၂၀၀ ကျပ် ၄၀၀၀၀
၀င်ငွေ ၁၅၀၀၀၁ကျပ် မှ ၂၀၀၀၀၀	၁၉ ရာခိုင်နှုန်း (%)	ကျပ် ၉၅၀၀ ကျပ် ၅၀၀၀၀
၀င်ငွေ ၂၀၀၀၀၁ကျပ် မှ ၃၀၀၀၀၀	၂၀ ရာခိုင်နှုန်း (%)	ကျပ် ၂၀၀၀၀ ကျပ် ၁၀၀၀၀၀
၀င်ငွေ ၃၀၀၀၀၁ကျပ် မှ ၅၀၀၀၀၀	၂၂ ရာခိုင်နှုန်း (%)	ကျပ် ၄၂၀၀၀
၀င်ငွေ ၅၀၀၀၀၁ကျပ်နှင့်အထက်	၃၀ ရာခိုင်နှုန်း (%)
တစ်နှစ်စာစုစုပေါင်းဆောင်ရမည့် ၀င်ွေေအခွန်	ကျပ် ၅၀၈၀၀
တစ်လဆောင်ရမည့်ဝင်ငွေအခွန်	ကျပ် ၄၂၃၃
ဒိထက်ပိုပြီး အသေးစိတ်သိချင်ရင်တော့ computer တို့ကုမ္ပ္ပဏီမှာရှိတဲ့ ၀န်ထမ်းရေးရာဌာန၊ ဒါမှမဟုတ် Account စတဲ့ တာဝန်ယူထားတဲ့ဌာနမှာ စုံစမ်းသင့်တယ်လို့ ထင်တယ်။
Budget end ရောက်ရင်တော့ ကုမ္ပ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိတဲ့သူက အခွန်ဌာနမှာ ၀န်ထမ်းတစ်ယောင်ချင်းအတွက် Official letter တစ်နည်းအားဖြင့် ထောက်ခံစာ သဘောမျိုးပေါ့ ယူပေးလေ့ရှိတယ်။ တစ်နှစ်ဝင်ငွေဘယ်လောက်မှာ ၀င်ငွေခွန် ဘယ်လောက်ဆောင်ထားတယ် စသည်ဖြင့်ပါရတယ်လေ။
ahnyartamar အကိုရေ….. ကျွန်တော်တစ်ခုပြောမယ်နော်… အကိုတွက်ပြတဲ့ဟာထက်ကျွန်တော်တို့က ပိုပြီးပေးနေရတယ်ဗျ…. ကျွန်တော့်မှာ အမျိုးသမီး နဲ့ သားတစ်ယောက် ရှိတယ်.. သားက5နှစ်ပြည့်ခါနီးပါပြီ…. ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်လစာရင်းက 30000 ရပြီး အခွန်က 7900 ဆောင်ရတယ်…ပြီးတော့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းလူပျို/အပျိုတွေလည်း လစာရင်း 30000 ရပြီး 7900 ဆောင်နေရတယ်…. ဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူးဗျ…. ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံတော်ကိုဆောင်တဲ့ အခွန်ပြေစာတွေကတော့ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ တရားဝင်ရနေပါတယ်….. များနေတယ်ဗျာ….
I just share for what i read from journal.
၀င်ငွေခွန်နဲ့ပတ်သက်လို့ “ပြည်သူ့ခေတ်” ဂျာနယ် အတွဲ“ ၂ ”၊ အမှတ် “ ၇၄” စ၍ “၀င်ငွေခွန်ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ်သူတွေပေးရမှာလဲ” ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ မောင်ကိုနီ(တရားရုံးချူပ် ရှေ့နေ) ရဲ့အခန်းဆက်ဆောင်းပါးကို ဖတ်စေချင်ပါတယ်။
အဲဒီထဲမှာ ၀င်ငွေခွန်ပေးရန် တာဝန်ကို ဒီလိုဆိုထားပါတယ်။
မည်သည့်အခါ ၀င်ငွေခွန်ပေးရန်တာဝန်ရှိပါသနည်း။ ပညာရပ်ဆိုင်ရာစကားလုံးများကို မကိုးကားပဲအရင်ဆုံးအရပ်ပြော, ပြောရပါက “လူတစ်ယောက်သည်ဝင်ငွေရှိနေပြီး တစ်နှစ်အတွင်းဝင်ငွေသည် မိမိနှင့် မိသားစုစားဝတ်နေရေး၊ ကျန်းမာေ၇း၊ ပညာရေး၊ ဘာသာရေး၊ လှူဒါန်းရေးကိစ္စ ရပ်များ၊ သုံးစွဲပြီးနောက် အတော်အတန်ပိုလျှံနေသေးပါက ထိုသူသည်ဝင်ငွေခွန် ပေးဆောင်ရန်တာဝန်ရှိပြီ “ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။
Myo Win Hlaing says:
ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေ ကို ခေတ်နဲ့ညီအောင် ပြင်သင့်နေပါပြီ
အရင် ဥပဒေ အရဆိုရင် နေ့စားအလုပ်သမား နဲ့ ပဲပြုပ်သယ်တောင် အခွန်ဆောင်ရမှာ
လွှတ်တော် မှာ အမြန်ဆုံး လုပ်ရမဲ့ အလုပ်ပါ
အခုလို ဖော်ပြပေးတဲ့အတွက် knowledge ရတာပေါ့
တကယ်.အမှန်တရားဘဲဗျို. ……………ကျွန်တော်တို.စီမှာလည်း လက်ရှိအခွန်ပေးဆောင်နေရတာ ဒီနှုန်းထားအတိုင်းပါဘဲ 25 % ထက်တောင်ကျော်ပါသေးတယ်။ တကယ်.ကိုနားမလည်နိုင်တဲ. အခွန်နှုန်းထားဘဲဗျို. ဘယ်လိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ၊ဘယ်လိုဥပဒေနဲ.တွက်ချက်ပြီး ကောက်ခံသလဲဆိုတာ သိတဲ.လူများရှိရင် share ပေးကြပါအုံး။ တစ်လ တစ်လ မလုံမလောက်လစာလေးနဲနဲနဲ. အခြေခံစားဝတ်နေရေး basic need တောင်မပြည်.စုံတဲ.သူတွေဆီက နိုင်ငံတော်က ကောက်ခံတဲ.နှုန်းထားကများလွန်းတယ် သင်.တင်.တဲ.နှုန်းထားလေးဆို အခြေခံအလုပ်သမားတွေအတွက် အဆင်ပြေကြမှာပါ ခုတော. ………………မပြောတော.ပါဘူးဗျာ နိုင်ငံတော်ရဲ.စေတနာတွေ.ပေါ.။
တချို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တချို့ကုမ္ပ္ပဏီတွေက နည်းမျိုးစုံနဲ့ အခွန်ကိုရှောင်ကြတယ်။ ၀န်ထမ်းရဲ့ ၀င်ငွေကို လျှော့ပြကြတယ်။ Ledger book ကိုနှစ်မျိုးထားတယ်။ ကုမ္ပ္ပဏီမှာတစ်မျိုး၊ အခွန်ဌာနကို တင်တဲ့အခါ တစ်မျိုးပေါ့။ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ကုမ္ပ္ပဏီကတော့ အားလုံး အမှန်အတိုင်း
(စာအုပ်ကြီးအတိုင်း)သွားတယ်ဗျ။ ဒါကြောင့် အောက်ဆုံးအဆင့်ဝန်ထမ်းအထိ အခွန်ဆောင်ကြရတယ်..
computer ပြောသလိုဘဲ ၂၅%လစဉ်အခွန်ဖြတ်ခံရပါတယ်…
နိုင်ငံသားတစ်ဦးဟာ ၀င်ငွေခွန်ကို ဂုဏ်ယူစွာဆောင်သင့်တယ်…ဆိုတာလက်ခံပါတယ်…ဒါပေမဲ့
ခေတ်နဲ့ စံနစ်နဲ့ လျှော်ညီတဲ့ အခွန်နှုံးထားဖြစ်သင့်ကြောင်းပါဗျာ…
အင်းးးးးးးး တလကိုလစာ 30000 ရတဲ.သူက ကျန်းမာရေး ပညာရေးကို မဆိုထားနဲ.အခြေခံစားဝတ်နေရေးလုံလောက် ပြည်.စုံနေပြီလို. သတ်မှတ်နိုင်သလား အခွန်ဆောင်သင်.ပြီလား။ ahnyartamar တွက်ပြသလို တစ်လဆောင်ရမည့်ဝင်ငွေအခွန် ကျပ် ၄၂၃၃ ပေးသင်.သလားကောက်ခံသင်.သလား။တနှစ်ဝင်ငွေ ၅၀၀၀၀၁ကျပ် (တလ၀င်ငွေ လေးသောင်းကျော်ကျော်)နှင့်အထက် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း (%) ဆိုတာကရော တကယ်.ကိုပေးသင်.တဲ. နှုန်းထားဖြစ်သင်.သလား။
ဘာကြောင်.လဲဆိုတော. ဆင်းရဲတဲ.သူတွေ ပါလို. သတ်မှတ်ထားတဲ. international poverty line က
U.S. $1 and $2aday (2004 ကRate ဖြစ်ပါတယ်) ဖြစ်နေလို.ပါ……..။
နိုင်ငံသားတစ်ဦးဟာ ၀င်ငွေခွန်ကို ဂုဏ်ယူစွာဆောင်သင့်တယ်…ဆိုတာလက်ခံပါတယ်…
ဒါပေမဲ့ calculation ကို ပြင်သင့်တယ်လို့ ထင်တယ်။
တစ်နှစ်ဝင်ငွေကို အခြေခံထားပြီး တွက်တဲ့အတွက် တစ်နှစ်ဝင်ငွေကို ပြန်ပြင်သင့်တယ်။
လက်ရှိမှာ ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်ရဲ့ တစ်နှစ်ဝင်ငွေ 30,000 ကို အခြေခံပြီး တွက်နေပေမယ့် အနိမ့်ဆုံး ၀န်ထမ်းတောင် တစ်လ၀င်ငွေ 3,000 မက ရကြပါတယ်။
ဥပမာ တစ်နှစ်ဝင်ငွေကို အနိမ့်ဆုံး 300,000၊ 400,000 ကနေ စပြီးတွက်ရင် အနည်းဆုံးတော့ ၀င်ငွေခွန် ဆောင်နေရပေမယ့်လည်း အထိုက်အလျောက်တော့ သက်သာတာပေါ့။
ခေတ်နဲ့ စနစ်နဲ့ လျှော်ညီတဲ့ အခွန်တွက်ပုံတွက်နည်းကို အမြန်ဆုံးအကောင်အထည် ဖော်သင့်ပြီလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။